Wafti ka socda maamulka Puntland oo ku sugan degmada Widh-Widh, kulamana la qaatay bulshada deegaanka. – Radio Daljir
Wafti ka socda maamulka Puntland oo ku sugan degmada Widh-Widh, kulamana la qaatay bulshada deegaanka.
Widh-Wadh, July 02 – Wafti dawladda Puntland ayaa maanta gaaray degmada Wadhi-Wadh ee gobolka Cayn kuwaasi oo ka ambabaxay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Waftigani oo uu hoggaaminayey wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbrashada Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Carab ayna ka mid ahaayeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo uu ka mid ahaa xildhibaan Faarax Sulub Jaamac iyo masuuliyiin waxaana socdaalkoodu uu ku qotomaa u kuur-galidda xaaladaha kala duwan ee deegaanka.
Socdaalka masuuliyiintani ayaa ujeedkiisa ugu weyn lagu sheegay sidii meesha looga saari lahaa mad-madow dhanka siyaasada ah oo soo kala dhex galay bulshooyinka Buuhoodle iyo kuwa Widh-Widh, taasoo ka danbeysey kadib markii dhawaan halkaasi lagu soo gaba-gabeeyey shir-nabadeed bulshada deegaanku ay aad u caaliqeen.
Haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Carab ayaa idaacada Daljir uga warramay socdaalkooda Widh-Widh iyo waxyaabaha uu salka ku hayo, waxaana uu sheegay ahmiyadda ugu weyn ee tagitaankoodu in ay tahay sdadkooda iyo deegaankooda ay iskula socon lahaayeen loogana fogaan lahaa siyaasadaha gurracan.